Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: maika fa izay any anaty birao | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: maika fa izay any anaty birao
Asa ireny na mpanendaka tra-tehaka na olona tratra ambody omby eo am-pikasana karazan-draha voarara, asa koa ireo efa-dahy nitondra azy roa lahy voasambotra na tena pôlisy na tsia, fa afaka ho heverina mpitandro filaminana ara-dalàna nohon’ny fisin’ny pôlisy manao fanamiana nanakaiky azy ireo, ny fotoana koa moa maraina ary maro olona iny alatsinainy maraina teo Soarano eo anoloanan’ny trano-be Ramaroson.
9 ora, andro faha 9, volana faha 9, taona faha 19 tamin’ny faha 2000. Ny ampitson’ny fandraisana ny Papa François. Tsy nisy akory ny fahagagana, ary toy ny isan’andro dia efa namely ny mpanao ratsy. Daka izao amelezan’ny iray tamin’ireo mpitantana ny iray tamin’ireo olona voasambotra, dakany any amin’ny kitrokely mba amingan-tena ilay bandy ka raha vao mila hianjera dia ataony sito-mahery tsy misy antra no fafazany daka mirivorivo. Ny olona tsy misy miteny, sao misy pao-basy tsy nahy.
Ny manam-pahefana rehetra moa dia samy nandetika an’ilay pôlisy tratra nohon’ny sary niparitaka nitifitra an-kitsirano olona efa mitsirara amin’ny tany. Tsy voalohany iny tranga fahafatesana olon-dratsy iny nohon’ny fahasahina tafahoatra asehon’ny mpitandro filaminana izay tsapa fa efa monamon’aina nohon’ny tsy fahenteran’ny fihatran’ny lalàna eo amin’ny fanamelohana ny olona nahavanon-dratsy. Na izany aza, olona notsongaina tamin’ny fifaninanana ny pôlisy, nandalo fanazaran-tena ka afaka heverina ahafehy tena tsy hirona na hihoa-pefy nohon’ny faahsarotan’ny fanatanterahany ny andraikitra ahankina aminy.
Maresaka moa ny fiapangana ny pôlisy momban’ny herisetra sy etraketraka asetriny ny olona eo am-pelatanany indrindra fa rehefa miditra amin’ny fanadinkadinana.
Manam-pahefana sy adidy izy itahy ny fanarahan-dalàna, fa tsy tompon-dalàna na tompo-pahefana amin’ny fanjakazakana. Izay manohitra azy na am-bava na aman-kery dia meloka fa na izany aza tsy manana zo idaroka na maika moa amono ahafaty ny mpitandro filaminana.
Mampiahiahy ihany anefa ny fahitana an’ilay tranga ampahibemaso tamin’io alatsinainy 9/9/2019 tamin’ny 9 maraina io, toa mitory toe-tsaina efa mahazatra tsy tahotra tsy henatra fanaovana valavala olona efa voarohy izao. Maika izany fa rehefa any anaty efitra tsy misy mpahita.
Mizara roa moa ny hevitra momban’ny fifandraisan’ny mponina sy ny mpitandro filaminana. Ao ny fiheverana fa ny fahatahorana pôlisy sy zandary no mitarika any amin’ny fahendrena, andanin’izay anefa dia marina ary rariny ihany koa ny fiheverana fa ny fifampatokisana eo amin’ny mponina sy ny mpitandro filaminana no antoky ny fiarahana mitahy ny firarin’ny fiaraha-monina, tsy ireo no fanao fahavalo fa ny ratsy no fahavalo iombonana. Ary na miray hina aza samy manana ny adidiny sy fahefany ary na mitovy tanjona aza ka miara-mihaza ny ratsy samy tsy manana zo na hitsara na hanameloka.